Nepal Auto | बजाज प्लाटिना र हिरो स्प्लेन्डर : कुन दमदार ? हेर्नुस् तथ्य
बजाज प्लाटिना र हिरो स्प्लेन्डर : कुन दमदार ? हेर्नुस् तथ्य6Ashad, 2076
बजाजले हालै प्लाटिना ११० एच–गियर लन्च गरेको छ भने हिरोको स्प्लेन्डर आईस्मार्टले पहिलो पटक बीएस–६ मान्यता पाएको छ ।
बजाज प्लाटिना ११० एच–गियरको ड्रम बे्रक भेरिएन्टको मूल्य ५३ हजार ३७६ भारु रहेको छ भने यसको डिस्क भेरिएन्टको मुल्य ५५ हजार ३७३ भारु रहेको छ । हिरोको स्प्लेन्डर आईस्मार्ट प्लस आइबीएसको ड्रम ब्रेक अलोय ह्विल भेरिएन्टको दिल्ली एक्स सोरुम मूल्य ५६ हजार २८० भारु रहेको छ ।
यी दुबै बाइकको लुक्समा केही अन्तर रहेको छ । हिरो स्प्लेन्डर आई स्मार्ट प्रिमियम र स्पोर्टी लुकमा देखिन्छ भने बजाज प्लाटिना स्पोर्टी देखिए पनि हिरो बाइकको तुलनामा फिक्का देखिन्छ । दुबै बाइकमा डिजिटल र एनालग मिटर कन्सोल जडान गरिएको छ । बजाज प्लाटिनाको सिट अलि अग्लो रहेको छ, जसले पछाडि बस्ने व्यक्तिलाई आराम मिलेको हुन्छ । स्प्लेन्डर आईस्मार्टको बडी ग्राफिक्स देखिन्छ ।
बजाज प्लाटिना ११० एच–गियरमा ११५ सीसी इन्जिनको जडान गरिएको छ । जसले ८.६ पीएस पावर र ९.८१ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । सो बाइकमा ५ स्पिड गियरबक्स समावेश गरिएको छ । सो बाइकको तौल ११८.५ किलोग्राम रहेको छ ।
हिरो स्प्लेन्डर आईस्मार्टमा ११० सीसी इन्जिनको जडान गरिएको छ । जसले ९.१० पीएस पावर र ९ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । सो बाइकमा ४ स्पिड गियरबक्स समावेश गरिएको छ । सो बाइकको तौल ११६ किलोग्राम रहेको छ ।
ब्रेकिङको कुरा गर्ने हो भने स्प्लेन्डर आईस्मार्टको फ्रन्टमा १३० एमएमको ड्रम ब्रेक जडान गरिएको छ । यसको रियरमा ११० एमएम ड्रम ब्रेक समावेश गरिएको छ । तर यसमा डिस्क ब्रेकको भने सुविधा दिइएको छैन । बजाज प्लाटिना ११० एच–गियरमा २४० एमएम फ्रन्ट डिस्क ब्रेक र रियरमा ११० एमएमको ड्रम ब्रेक जडान गरिएको छ । साथै यसमा १३० एमएम ड्रम ब्रेक उपलब्ध रहेको छ । यी दुबै बाइकमा सीबीएस फिचर समावेश गरिएको छ ।
नेपाली बजारमा अपग्रेडेड बजाज प्लाटिना एच गियर र होन्डा स्प्लेन्डर आईस्मार्ट आउन केही समय लाग्न सक्छ । हाल बजाज प्लाटिना ईएस र स्प्लेन्डर आईस्मार्ट आईथ्रीएस उपलब्ध छ ।
प्लाटिना ईएसको मूल्य १ लाख ६४ हजार ९ सय र स्प्लेन्डर आईस्मार्ट आईथ्रीएसको मूल्य १ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ ।
The UN General Assembly today approvedaresolution supporting coordinated globa...
Mahindra Two Wheelers Introduces Gusto 125 cc Scooter
Kathmandu, March 13 2016: Mahindra Two Wheelers Ltd. (MTWL), part of the USD 16....
सेलिब्रिटीका दशैं योजना : कुन कलाकारको दशैंमा के छ योजना ?